Wiil Gacanta Is Gooyey
Bulla-Xaar, 10 Feb 2015 (Alldhooftinle.com)
Wiil Gacanta Is Gooyey Internetka Awgeed.
Wiil Shiine ah oo magaciisa lagu soo koobay Little Wang ayaa gacantiisa mindi ku gooyey si uu u joojiyo isticmaalka internetka oo habeen iyo maalinba uu isticmaali jirey. Wang ayaa sheegay inuu wax kasta sameeyey si uu u joojiyo isticmaalka internetka laakiin aanu ku guuleysan taasina ay keentay inuu gacantiisi bidix gooyo.
Wang ayaa markuu gooyey gacantiisa uga tegey guriga ka dibna taxi u qaatay cusbitaalka. Laakiin gacantii ayaa la soo qaaday laguna tolay. "Lama hubo inay sidii hore u shaqayn doonto, laakiin waa u dhaamaysaa gacan la'aanta" sidaa waxa yiri mid ka mid ka mid ah dhakhaatiirta daweysay Wang.
Bishii hore ayay ahayd markii nin sadex maalmood aan computer ka kicin ku dhintay dalka Taiwan, waxaana soo badanaya dadka qabatimay isticmaalka internetka iyadoo ay dad fara badani soo jeediyeen in la xadeeyo oo dowladu sharciyo kasoo saarto isticmaalka inyernetka.